Jwxo-shiil, oo ay Laba Wiil Waardiyeynayaan oo Jabuti Jooga. – Rasaasa News
Apr 13, 2010 Itobiya, Jwxo-shiil, Somali Galbeed
Jwxo-shiil, oo Ilaahay Amarkii iyo ayaan-darada ururka ONLF ku soo dhex galay halganka, ay waday Jabhadu, ayey ahayd arinta uu ururka jid iyo jihaba ugu diiday in uu Itobiya jago kaga doonto. Waxayse nasiib daro wayne soo food saartay kolkii ay uga hormareen Itobiya kuwii uu xabadooda ka dhex mari jiray Itobiya, oo ah ururka Somali Galbeed.
Marna Jwxo-shiil, kuma seexan kumana soo toosin, ururka Somali Galbeed ayaa Itobiya kaa dhex mari doona, wuxuuna u arkayey una tusayey Itobiya in Somali Galbeed ay yihiin dad xag jir ah, waana arintaas mida uu xabada ula dhacay wiilashii dalka.
Jwxo-shiil, oo dhimasho mooyee uuna cimri u dhinayn, ayaa da,adaas ku galay dhiig islaan iyo dhagar sokeeye, oo dhawaa iyo dheeraaba dharaar laga gudidoono godobta sokeeye. Dilalka uu gaystay ayuuna marna galeen hadii uu ogaan lahaa in Malase uu ka dooran doono Somali Galbeed.
Jwxo-shiil, oo ay arin dharaar ku noqotay oo aan ciidan, shacab iyo siyaasad midna haynin, ayaa af qalalan la tagay South Afrika. Waxaana uu waan waan ka dalbay ururka Somali Galbeed oo iyagu ka dhexmaray Jwxo-shiil Itobiya kana siyaasad roonaaday.
Jwxo-shiil, oo sidii uu godobta u galayba maradiisa ka dida, ayaa waxaa waaridyeeya wiilal uu adeer u yahay, isaga oo afkiisa laga yeedhsiiyey uun “reer Cabdile ayaa i dilaya.”
Hadaba, sida ay warar hoose sheegayaan Jwxo-shiil, ayaa waxaa uu ku baryootamayaa in Somali Galbeed ay heshiiska Itobiya lala galayo wax kaga darto. Waxaana la filayaa in saraakiil Somali Galbeed ah, Jwxo-shiil iyo saraakiil Itobiyaan ah ay ku kulmaan maalmahan fooda inagu soo haya Jabuuti. Jwxo-shiil ayaa waxaa uu ku gawracan yahay in uu qaato wax alaale wixii la siiyo, maadaama uusan maanta haynin wax uu ku gorgortamo, marka laga reebo lafihiisa oo uu cidna ku aamini la,a yahay.
Ina-dhuubo, ayaa sida ay wararku sheegayaan madaxda Somali Galbeed ka tuugay in ay heshiiska ka qayb galiyaan, sida ay waraku sheegayaana waxaana uu telefoon dhawr goor kula xidhiidhay saraakiil Somali Galbeed ah oo jooga Carabta.
Baryadii Absame ee South Afrika ee in loola hadlo Somali Galbeed iyo tuugmadii Ina-dhuubo ee saraakiisha Somali Galbeed ayaa Jwxo-shiil loo ogolaaday in Jabuuti lagula kulmo.
Ugu dambayntii, waxaa suurto gal ah in Jwxo-shiil kulanka Jabuuti ee uu codsaday uu tagi waayo cabsi uu ka qabo dadka Somalida Ogadeeniya iyo iyada oo uu daba maruhu u yahay xirfadaha uu ku dhaqmo.